Dowladda iyo shacabka Puntland oo u dabaaldegey xilligii la aasaasay. – Radio Daljir
Agoosto 1, 2016 10:38 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland oo khudbaddiisii sannad laha ahayd jeediyey ayaa mahadcelin ka dib shacabka Puntland ugu hambalyeeyey maalintaan qaaliga ku ah ee 1-da August, isla maraana waxa uu ka sheekeeyey xaaladda guud ee Puntland, guulaha la gaarey muddadii 18-ka sano ahayd ee ay Puntland jirtey iyo halka ay hiigsanayso Puntland.
Madaxweynahay ayaa sheegay in amniga guud ee Puntland uu yahay mid sugan isla markaana looga baahan yahay shacabka Puntland in ay gacmaha is qabsadaan si’ay u ilaashadaan amnigooda, iyagoona meel uga soo wada jeesanaya kuwa magacyada kala duwan adeegsanaya ee cagabadda ku ah amniga iyo xasilloonida waddanka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in ujeedkii Puntland loo aas-aasay u ahaa in lagu baadi goobo dawladdanimadii Soomaaliyeed ee xoogga lahayd ee burburtay isla markaana aya Puntland ilaa iyo hadda u heellan tahay sidii ay ummadda Soomaaliyeed u heli lahayd dawladnimo taam ah ugana bixi lahayd diihaalka daashadey dadka Soomaaliyeed.
Ugu dambayn Madaxweynaha ayaa shacabka Puntland markale ugu hambalyeeyey farxadda Sannad guurada 18-aad ee kasoo wareegtey aas-aaskii Puntland waxaana uu Eebbe uga baryey in uu sannadkaan sannadkiisa ku gaarsiiyo bash-bash, barwaaqo iyo baraare.